Air Bagan လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဓာတ်ပုံများ (ဓာတ်ပုံ ထူးအိမ်သွင်(ဟဲဟိုး)) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Air Bagan လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဓာတ်ပုံများ (ဓာတ်ပုံ ထူးအိမ်သွင်(ဟဲဟိုး))
Air Bagan လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဓာတ်ပုံများ (ဓာတ်ပုံ ထူးအိမ်သွင်(ဟဲဟိုး))
Posted by အာဂ on Dec 26, 2012 in Photography | 18 comments
ကွင်းမရောက်ခင်မြူနှင်းများ များနေ၍ ကွင်းမရောက်ခင်ဆင်းသွားပြီး ပျက်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၆၆ Kv ဓာက်အားလိုင်းနှင့်ချိတ်မိပြီး ကားလမ်းပေါ်မှသွားနေသောဆိုင်ကယ်(၁၄ယ/၆၇၆၄၀)ဆိုင် ကယ်ကိုဝင်တိုက်ပြီးလေယာဉ်ကွင်းထဲးသို့ဎင်သွားပြီး အတောင်ပန်သည်သစ်ပင်များနှင့်ဎင်ချိတ်၍ ကွင်းထဲသို့ပျက်ကျသွားပါသည်။ဆိုင်ကယ်သမားမှာပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားပါသည်။
သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ။ ။ မျိုးဦး(ဟဲဟိုး)
တင်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :hee:
တော်တော်လေးကိုစုံပါတယ် ကင်မရာမန်း တော်ပါပေတယ်ဗျာ။
လေယာဉ်ကပျက်စီးသွားတာပဲ သတိတစ်ချက်လွတ်တာနဲ့ အားလုံးပေးဆပ်ရတာ တော်တော်မတန်တာပဲ
ကင်မရာမန်းကို ဗရာဘို လို့ ပြောချင်ပါတယ်..
တိုက်မိတဲ့ သစ်ပင်တွေ . ဓါတ်အားလိုင်း ပုံတွေ ဘယ်မီဒီယာမှ မတင်နိုင်ပါဘူး..
စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ကြည့်ရှု အားပေးသွားပါတယ်…
အဲလင်းဗင်း ဂျာနယ်ကပုံတွေလို ့ထင်နေတာဗျ။ သေချာကြည့်တော့မှ တော်တော်လေး စုံစုံလင်လင်တင်ထားတာ တွေ ့ရတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြည့်ခွင့်ရလိုက်လို ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အာဂမောင်ရေ ့။
အဲပုဂံလေယာဉ်ပျက်က လွတ်လာသူ အင်နာရဲ့ အတွေ့အကြုံ
ဟဲဟိုး လေဆိပ်မှာ AirBagan လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အထဲ ပါခဲ့သူ ဩစတြေလျ နိုင်ငံသူ အင်နာ ဘာ့ချ်က သူအမေဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့ရာမှာ သူ့အတွေ့အကြုံကိုပါ ပြောပြပါတယ်။
“.. အမေ။ ကျမပြောတာသေသေချာချာ နားထောင်နော်။ ကျမတို့ဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ဘူး။ ဟုတ်ပြီလား။” .. အဲဒီလိုပြောပြီးမှ အင်နာ က လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အကြောင်း စပြောတယ်လို့ သူ့အမေဖြစ်သူက သတင်းမီဒီယာကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။… ဩစတြေလျသံရုံးကို အမြန်ဆက်သွယ်ပြီး ကျမတို့ကို ကိစ္စပြောပြပေးပါ။ ကျမတို့နဲ့ပါသမျှ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး… လို့ အင်နာက ပြောပါတယ်။
သူတို့ဟာ လေယာဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်း သုံးပုံ ၂ ပုံလောက်မှာ ရှိနေခဲ့ပြီး
လေယာဉ်ရှေ့ဘက်ပိုင်းကရော နောက်ဘက်ပိုင်းကပါ မီးခိုးတွေ ထွက်လာတော့ .. သွားပြီ။ ဒါနောက်ဆုံးပဲလို့ ထင်လိုက်တယ်။
လေယာဉ်နောက်ပိုင်းမှာ မီးလောင်နေပြီး နောက်တံခါးကနေ ထွက်လို့ မရဘူး။ နောက်တော့ လေယာဉ်ပျက် အရှေ့ပိုင်းကနေ ထွက်လို့ ရလိုက်တယ်။ တောအုပ်ထဲ လေယာဉ်ထိုးဆင်းလာတော့ တောင်ပံ၂ ဘက်စလုံး ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ အဲဒါကလည်း အင်မတန် ကံကောင်းတာ
ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တောင်ပံသာကျန်နေရင် အဲဒီမှာ လောင်စာရှိတာမို့
ပေါက်ကွဲမှာသေချာတယ်။ – လို့ သူအမေဖြစ်သူကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကို ရန်ကုန်ကို ချက်ခြင်းပဲ လေယာဉ်နဲ့ ပြန်ခေါ်သွားချိန်မှာ ပျက်ကျနေတဲ့ လေယာဉ်အပေါ်ကနေပဲ ဖြတ်ပျံရပြီး လေယာဉ်ဟာ တကယ်ပဲ ၂ ပိုင်းပြတ်နေတာကို အပေါ်စီးက မြင်ခဲ့ရတယ်လို့
(ဓာတ်ပုံ- လေယာဉ်ပျက်ရာမှာ ပါခဲ့တဲ့ အန်နာ ဘာ့ချ်)
ABC သတင်းကို ကိုးကားထားပါတယ်။
ကိုမိုးသီး ဘလော့ က ကူးလာတာပါ..
တောင်ပံတွေ ပြတ်သွားလို့ ကံကောင်းတာဆိုပဲ ….
အရေးပေါ်တံခါးက ဖွင့်မရဝူး ဆိုပဲ …
မွန်ကစ်လည်း ဖတ်မိတာလေး ရှယ်ချင်လို့..
ဧည့်လမ်းညွှန်လေး နွယ်လင်းရှိန်အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိလို့ပါ……
မနွယ်လင်းရှိန်၏ ဈာပနသတင်း နှင့် ကိုယ်တွေ့ကြုံသူများ၏ ပြောစကားများ
စပိန်ဧည့်လမ်းညွှန်(၂)ဦးဖြစ်သော မချိုသာနှင့် မဌေးဌေးမေတို့သည်
ရပ်စောက်မြို့တွင်ရောက်ရှိနေပြီး ကွယ်လွန်သူ၏ မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံကာ
ယနေ့အသုဘချမည့်ကိစွများကို ကူညီဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယနေ့ ၂၇၊
ဒီဇင်ဘာ၊ နေ့လည်(၂)နာရီတွင် ရပ်စောက်မြို့တွင် မီးသင်္ဂြိလ်မည်ဖြစ်သည်။
ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးအား ရပ်စောက်မြို့၊ နေအိမ်တွင် ၂၉၊ဒီဇင်ဘာလ တွင်
ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘများထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
မနွယ်လင်းရှိန်သည် မွေးချင်း (၃)ဦးအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မိသားစုအား
ဆွမ်းကျွေးလုပ်မည့်အစီအစဉ်ကို မိသားစုမှ ထပ်မံအသိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
နာရေးအတွက် ကုသိုလ်ပါဝင်လိုသူများ အောက်ပါ PH များအား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
”လေယာဉ်က ဘီးကျတဲ့အချိန်မှာ ဓာတ်ကြိုးကို စပြီးတိုက်မိတယ်။
မီးကြိုးကရှော့ခ်ဖြစ်ပြီး ဖောင်းကနဲမြည်သွားတဲ့အသံကို ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ
အကုန်လုံးကြားလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ လေယာဉ်နောက်ပိုင်းက ပွင့်ထွက်သွားတယ်။
နောက်ပြီးလေယာဉ်က ပန်းခင်းထဲကိုကျသွားတယ်။ ကျတဲ့အချိန်မှာ မီးလုံးဝ
မလောင်သေးဘူး။ မီးမလောင်သေးတဲ့အချိန်မှာ လေယာဉ်မယ်က
ခရီးသည်တွေအကုန်လုံးကို လေယာဉ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပေးတယ်။
သူအဲဒီလိုထုတ်ပေးနေတဲ့ နောက် ဆုံးအချိန်မှာ သူ့ဆံပင်ကို မီးဟပ်သွားတယ်။
သူအပြင်ကို ရောက်ပြီး၊ ခရီးသည်တွေ အကုန်လုံးလွတ်ပြီးချိန်ကျမှ လေယာဉ်က
မီးလောင်ပြီး ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ ကျွန်တော်က လေယာဉ်စပြီး ပျက်ကျလာကစကတော့
ခရီးသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို ဘာမှမမြင်ရဘူး။ အပြင်ရောက်မှသာ တွေ့ရတာပါ။
အဲ့ဒါပြီးတော့ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကို အဲပုဂံ လေယာဉ်နဲ့
ခေါ်သွားတာကိုတွေ့ပါတယ်။ ရပ်စောက်မှာနေတဲ့ တိုးဂိုက်
”မနက်တုန်းက နှင်းတွေ တအားကျတယ်။ လေယာဉ်ကိုမမြင်ရဘူး။ လေယာဉ်ဆင်းလာတဲ့
အချိန်မှာ ဓာတ်ကြိုးနဲ့တိုက်ပြီး လေယာဉ်နောက်မြီး တစ်ခုလုံးက
ပြုတ်ထွက်တော့မလို ဖြစ်သွားတယ်။ မီးမလောင်ခင် နာရီဝက်လောက်အလိုမှာ
အသက်ကယ် တံခါးပေါက်ကနေ လှေကားကိုချပြီး ခရီးသည် အကုန်လုံးကို
အောက်ကိုချပေးတယ်။ အဲ့ဒီ့လေယာဉ်မယ်လေးက တော်တော်လေးကို တော်ပါတယ်။
ခရီးသည်တွေကို သူဆွဲထုတ်ပေးနေရင်းနဲ့ ဝုန်းခနဲဆို ပေါက်ကွဲတဲ့အသံကြီးကို
ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာတော့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကို
သူမကယ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ချိန်ကျမှ သူက လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းတာ။
သူ့ဆံပင်ကိုမီးဟပ်သွားတယ်။ ခရီးသည်တွေအောက်ကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်မက သူတို့အနားကို သွားကြည့်တော့ သူတို့တွေပြောနေကြတာက သေသွားတဲ့
ဧည့်လမ်းညွှန် အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ ဧည့်သည်ကို အရင်ဆင်းခိုင်းတယ်။
သူ့ဧည့်သည်အောက်ကိုရောက်သွား ချိန်မှာပဲ လေယာဉ်ထဲကို မီးခိုးငွေ့တွေ
ဝင်လာတော့ သတိမေ့သွားပြီး မထွက်နိုင်တော့တာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောကြတယ်”
ဒေါ်စိုးစိုးလွင် ဟဲဟိုးမြို့မှ မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ ဒေသခံတစ်ဦး
” လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမဖြစ်ခင်မှာ မြူတွေက ထူထပ်နေတယ်။ လေယာဉ်က
တောင်ကြီးမြို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနေတဲ့ ၆၆ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းကြိုး
တွေပေါ်ကို အရင်ဆုံးကျခဲ့ပြီးတော့ လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နဲ့ ညပ်ပါသွားတဲ့
လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးတွေက လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်က
လူတစ်ယောက် ကို ထိမိပြီးတော့ အဲဒီလူဟာ သေဆုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့
ဓာတ်လိုက်ပြီး သေတာဖြစ်မယ်။ သူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခြမ်းက မဲပြီး
တစ်ခြမ်းကဖြူနေတယ်။ ပြီးတော့ အပင်တွေကြားထဲဝင်ပြီး
တောင်ပံနှစ်ဖက်လုံးကျိုးသွားတယ်။ ပြီးတော့ လေယာဉ်က တရွတ်တိုက်ပါသွားပြီး
ထက်ပိုင်းကျိုးသွားတယ်။ အဲဒီမှာ ခရီးသည်တွေ က လေယာဉ်ပေါ်ကထွက်လာတယ်။
သောင်းနိုင်ဦး ၊ မန္တလေး
အင်း …. ကိုယ့်ဟာကိုယ် လမ်းပေါ် ဆိုင်ကယ်စီးနေတာ လေယာဉ်ပျံဝင်တိုက်ပီး ဓါတ်လိုက်သေရရှာသတဲ့…။
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကြံကြံဖန်ဖန် သေနည်းကားမျိုးပါပဲ…။
ကမ်ဘာမှာ ပထမဆုံး လေယာဉ်တိုက်ခံရပြီးသေသူဖြစ်နေမလားမသိဘူး။
ဘယ်လိုမှားတယ်ဆို တာထက် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ (လေယဉ်ဝန်ထမ်းများ နဲ့တိုးဂိုဒ် ) ဘယ်လိုလုဎ်ဆောင်သွားတာကိုဘဲ လေးစားမိပါတယ်ဗျာ
ဒီလောက်ပဲ အသေအပျောက် ရှိတာ တော်သေးလို့ အကောင်းမြင် ပြောရမှာပဲ။ ဒါနဲ့ ဟိုတလောက အာမခံတွေ ပြောသံတော့ကြားသလားလို့ သူတို့လေယာဉ်အာမခံတွေ နိုင်ငံခြားမှာထားတာဆို လျော်ကြေးတော့ ရမယ်ထင်ပါ့နော
ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပါ။ ကမာ္ဘ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်ပျံအတိုက်ခံရလို့ သေတဲ့ case ထင်တယ်နော်။ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
လေယာဉ်ပျံတိုက်မိတဲ့ အထုံပါရမီပေါ့နော် စိတ်မကောင်းဘူး း((((
ဘာဖြစ်လို့လဲမသိ ဓါတ်ပုံတွေ မမြင်ရဘူးဗျ။
ကြည့်ရှုကြတဲ့လူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတွေက ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့တင်ထားတာပါ။ အမှန်ပြောရင်ရင် နောက်ထပ် ပုံတွေရှိပါသေးတယ်။ အချိန်မရလို့ ရသလောက်လေးပဲတင်ပေးလိုက်ရတာပါ။..။
လေယာဉ်မယ်တွေနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်လေးတွေ တော်ပါပေတယ်။
ကျမတို့ငယ်ငယ်က သံတွဲမှာလေယာဉ်ပျက်ကျတော့ ခရီးသည်တွေကို ကယ်ရင်း အသက်စွန့်သွားတဲ့ လေယာဉ်မယ်တင်တင်လှိုင်ကို သတိရမိပါတယ်။
သူ့အလောင်းပြန်ရချိန်မှာ ငါးတွေ တစ်ချို့တစ်ဝက်စားထားပါပြီ။
အဲဒီအချိန်က နာမည်ကြီး အဆိုတော် ဇော်မင်းလေးက လေယာဉ်မယ်လေးလှိုင် အကြောင်း သီချင်းဆိုထားတာ အလွန်ကောင်းလို့ ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သော်လည်း မှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းကအတက်မှာပြုတ်ကျသွားတဲ့ လေယာဉ်မှာတော့ စာရေးဆရာမကြီး မဝင်းမြင့်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျုပ်တို.နိုင်ငံက မော်တော်ကားဒရိုင်ဘာတွေဟာ ဘာအတွက်ကြောင့်ပဲ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ဖြစ် ယာဉ်မောင်းဟာအမြဲတမ်း အရေးယူခံနေရစတမ်းပါ ။ အခုလို လေယာဉ်အက်စီးဒင့်မှာကျတော့ လေယာဉ်မှူးကို အရေးယူတယ်လို. ပြောသံမကြားမိပါဘူး ။ ဒါဟာ ယာဉ်မောင်းချင်းအတူတူ တစ်ခုခုများလွဲချော်နေသလားလို. ခံစားရမိကြောင်းပါ ……………………….